Chii chinonzi Akaunti-Yakavakirwa B2B Kushambadzira? | Martech Zone
Boka rako rekutengesa rinonzwa sei chaizvo pamusoro pekutengesa kwako? Chero nguva apo vatengesi veB2B pavanobvunzwa iwo mubvunzo, mhinduro dzinowanikwa kwese. Vatengesi vanonzwa kunge vari kukotama neshure kuti vaendese hombe vhoriyamu yemutungamiri, uye Kutengesa zviri pachena hakusi kunzwa rudo. Shanduko inoenda chimwe chinhu seichi.
Kushambadzira: Isu takaendesa 1,238 Kushambadzira Inotungamira Inotungamira (MQLs) mukota ino, 27% pamusoro pechinangwa chedu!
Kutengesa: Isu hatisi kungowana rutsigiro rwatinoda.
Kana izvi zvichinzwika kujairika, hausi wega.
Saka nei zvikwata zviviri zviri zviviri zvakazvipira mukusimudzira shanduko uye kuvhara kutengesa kuri kunetseka kushanda pamwechete kuyambuka rakakura B2B kupatsanura? Nepo vashambadziri vakatarisa pane vhoriyamu, timu yekutengesa inoda kusvika vashoma vanopesvedzera pamakambani anotarisirwa. B2B vatengesi vanowanzovimba pfapfaidza uye namata mishandirapamwe inoparadza zviwanikwa zvekambani, kana kushambadzira kunoona kunobata vanhu kwete makambani.
Nehurombo, Kutengesa kunoziva kuti iyo inotungamira Yekushambadzira kunounza haigone kupedzisira seyakavharwa bhizinesi. Nekuda kweizvozvo, havazvinetse nekutevera izvo zvinotungamira… uye kunongedzera munwe kunotanga.
Kiyi yekugadzirisa dambudziko iri kutora mapoka maviri ari papeji rimwe chete kubva pakuenda. Ndicho chivimbiso chekushandisa mhinduro senge Demandbase B2B Kushambadzira Cloud. Iyo yekupedzisira-kumagumo mhinduro inobatanidza kushambadzira tekinoroji kune iyo fanera uye kuigadzirisira iyo yeB2B.
Kuburikidza account-based Analytics, Personalization uye Kukurukurirana mhinduro, chikuva chinopa vatengesi veB2B kugona kutyaira mhedzisiro uye kunyatsoona maitiro avo ari kukanganisa mari. Inobatanidza kushambadzira, kushambadza uye CRM, zvichigonesa zvese Kutengesa uye Kushambadzira kumisikidza uye kuteedzera zvinangwa mukati mehupenyu hwevatengi.
B2B Inoda Yakasiyana Game Chirongwa - Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira
ne Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira, unotanga nekushanda nekutengesa kuti uone makambani angangotenga. Ipapo, iwe unotengesa kune iwo maakaunzi ane zvakasarudzika zvemukati, uye kuyera kubudirira kwako padanho re account. Paunoita, tarisiro yepamusoro inowana kutarisisa kwavanoda kuti vafambe kuburikidza nefanera uye chikamu chimwe nechimwe cheakawunti account chinogamuchira akakodzera mameseji panguva yakakodzera. Iyi mishandirapamwe inoshanda zvakanyanya kupfuura mishandirapamwe yakanangana neuwandu, uye vanoendesa kuAccount 'target account. Izvi zvinoreva kuti bhizinesi nyowani yakavharwa uye kuwedzera kukura kwekambani zvakazara.
Kana usati wambowana wazviita kubva kuKutengesa, inguva yekutanga kuitisa pane ekushambadzira nzira yechinangwa muzvinangwa zvezvikwata zvese. Kwete chete kuti Kutengesa uye Kushambadzira kuve vashandirwi vepedyo mukati meB2B pombi, asi Kushambadzira kunogona kuratidza zvakajeka iyo ROI yekuyedza kwayo kupokana nezvinangwa account.
Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira haisi rocket sainzi, asi iyo nzira yeakakwira kushambadzira mashandiro, vatengi vanofara, uye zvinowedzera kuwedzera kutendeuka. Izvo zvakare zvinogona kutungamira kune Yekutengesa / Kushambadzira rudo fest. Ndiani asingade izvozvo?
Tags: b2bdemandbasekushambadzira gore
Vatengi Vari Kuedza Kusvikira Iwe paSocial Media, Uripo Here?
5 Zvakakosha Kugonesa Kushambadzira Kwekushambadzira